Забур 58 CARS - Nnwom 58 AKCB
Dawid “miktam” dwom.
1So mo asodifo, ampa ara sɛ, moka asɛm a ɛteɛ ana?
Mubu atɛntrenee wɔ nnipa mu ana?
2Dabi da! Modwene ntɛnkyew wɔ mo koma mu
na mo nsa de akakabensɛm ba asase so.
3Amumɔyɛfo fom kwan fi awo mu;
wɔyɛ mmaratofo fi awotwaa mu na wodi atoro.
4Wɔn ano bɔre te sɛ ɔwɔ de,
ɛte sɛ ɔprammiri a wawɛn nʼaso,
5a ɔnte ntafowayifo dwom,
na ne dwom dɛdɛ no mpo mfa ne ho.
6Ao Onyankopɔn, bubu ɛse a egu wɔn anom,
Awurade, tutu gyata no sebɔmmɔfo no gu!
7Ma wontwa mu nkɔ sɛ sunsuan;
sɛ wɔtwe wɔn agyan a, ma wɔn bɛmma no ano nwu.
8Ma wɔnyɛ sɛ nwaw horɔdɔhorɔdɔ bi a ɔrenan agu wɔ bere a ɔretene no.
Ma wɔnyɛ sɛ ɔba a owu wɔ awoe a onhu owia koraa.
9Ansa na mo nkuku bɛte nsɔe ano yaw,
sɛ ɛyɛ amono anaa awo no, wɔbɛpra amumɔyɛfo akɔ.
10Sɛ wɔtɔ were ma atreneefo a wɔn ani begye,
na wɔbɛhohoro wɔn anan ho wɔ amumɔyɛfo mogya mu.
11Afei nnipa bɛka se, “Ampa ara atreneefo kɔ so nya wɔn akatua;
na ampa ara Onyankopɔn bi wɔ hɔ a obu wiase atɛn.”
AKCB : Nnwom 58